Min Oke Kar Archives - MPPG
Home / Min Oke Kar
Min Oke Kar
minokekar April 1, 2016	Min Oke Kar
ရှားပါး firmware လေးတွေနော် ဒေါင်းထား ကြ သူများတွေ ရောင်းစားနေတာဆို မမှားဘူး ဟီး.. ထင်တာပေါ့နော်.. ကျန်တာ တားဘာမှ မတိဝူး File size : (350) MB Rar Pass >>> goolg12 အဆင်ပြေပါစေ.. Min Oke Kar (ဘီလူးကျွန်းသားလေး) နည်းပညာ http://www.minokekar.net/
Hello ဟုတ်ကဲ့ မင်္ဂလာပါနော်.. C8813 တွေ zapya နဲ့ဖုန်းတစ်လုံး နဲ့ တစ်လုံး ချိတ်ရင် ပြုတ်ပြုတ်သွားလား . ချိတ်လို့ မရဘူးလား Sarch လို့ မရဘူးဖြစ်နေလား.. ဒါလေးနဲ့ fix လိုက် အဆင်ပြေသွားမယ် စမ်းသပ်ပီးသား 100% ပါ.. ပြုလုပ်ပုံကတော့ ဒေါင်းထားတဲ့ zip ဖိုင်ကို pass ထည့်ပီး zip ဖြည်လိုက်ပါ အထဲမှာ zip ဖိုင်နောက်တစ်ခု ပါပါ လိမ့်မယ် ထပ်ပီး မဖြည်ချပါနဲ့ အထဲက C8813-wifi error.zip ဆိုတဲ့ ဖိုင်ကို sd card ထဲ ကူးထည့်ပါ ပီးရင် sd …
minokekar March 21, 2016	Min Oke Kar
COC Update (21.3.2016) Version: 8.212.3 Requirement: Android 4.0 Download (58) MB Pcloud Link http://sh.st/TV8sL Direct Link http://sh.st/TV9df ကဲ အဆင်ပြေကြပါစေဗျာ.. တစ်ခုခု အကြံပေးလိုပါကMy FB Acc >> Min Oke Kar << FB My Reader App Min Oke Kar (နည်းပညာ).apk Download (1) Download (2) ကျနော်တင်သမျှ Post တွေကို Facebook မှ တိုက်ရိုက်ဖတ်ရှုလိုပါက Min Oke Kar ဘီးလူးကျွန်းသားလေး နည်းပညာ page …
MTK (MTK 6582& 6589) သုံး CPU ဖုန်းများ Unknown Baseband နဲ့ IMEI & SN Error တွေကို DB File လေးနဲ့ Fix ကြမယ်.
minokekar March 21, 2016	Min Oke Kar, MTK, Tutorials & Tools
တနေ့ က ပြောထားတဲ့အတိုင်း mtk 6575&6572 အတွက် Baseband Unknown ကို MTK Droidtool နဲ့ fix လုပ်တဲ့နည်းကို ပြောပြပေးပီးပါပီ ဒီနေ့တော့ IMEI & SN Writer ကို အသုံးပြုပီး MTK6582& 6589 တွေကို သူ့ရဲ့ သက်ဆိုင်ရာ DB ဖိုင်ကို အသုံးပြုပီး IMEI နဲ့ SN တွေ ပြန်ရေးနည်း တင်ပေးမှာပါ ကဲအရင်ဆုံးလိုအပ်တဲ့ tool နဲ့ DB ဖိုင် ကို ဒေါင်းလိုက်ပါဦး IMEI & SN Writer V 1.5.3 (4.43) …
MTK ဖုန်းတွေ(mtk6575,6572) Baseband unknownဖြစ်ပီး IMEI invalid ဖြစ်တာတွေ Null နေတာတွေကို FIx လုပ်မယ်..
minokekar March 19, 2016	Min Oke Kar, MTK, Tutorials & Tools
အရင်ဆုံး လိုအပ်တဲ့ tool လေးနဲ့ MTK တွေရဲ့ Network ဖိုင်ဖြစ်တဲ့ NVRAM ကို ဒေါင်းထားလိုက်ပါဦး.. Download MTk DroidTool Vir 2.5.3 (9.0)MB http://sh.st/TO1eJ Rar Pass >>> www.minokekar.net Download MTK6572 NVRAM (20.8) KB http://sh.st/TOB1g Rar Pass >>> www.minokekar.net Download MTK6575 NVRAM (13.5) KB http://sh.st/TONix Rar Pass >>> www.minokekar.net အရင်ဆုံး ကိုယ်ရေးမယ့် ဖုန်းကို root ဖောက်ထားပါ ပီးရင် MTK Droidtool …